ESI MEE KA OTU PDF SI NA JPG - ỤDỊ FAỊLỤ - 2019
Jikota JPG n'ime faịlụ PDF
Sistemụ arụmọrụ na-emekarị mgbe ụfọdụ. Nke a nwere ike ime n'ihi na onye ọrụ ahụ mehiere, n'ihi ọrịa nje ma ọ bụ nkwụsị banal. N'okwu ndị dị otú a, egbula ngwa ngwa ịtinye Windows. Mbụ ị nwere ike gbalịa iweghachite OS na ala mbụ ya. Nke ahụ bụ otu esi eme ya na sistemụ arụmọrụ Windows 10, anyị ga-akọwa n'isiokwu a.
Iweghachi Windows 10 na ala mbụ ya
Ozugbo ahụ, anyị na-adọrọ uche gị gaa n'eziokwu ahụ na mkparịta ụka na-esonụ agaghị adabere n'ihe isi mgbake. N'ezie, ị nwere ike ịmepụta otu ikike mgbe ị wụnye os, ma nke a bụ site na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị ọrụ. Ya mere, a ga-emepụta isiokwu a maka ndị ọrụ nkịtị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere iji ihe mgbake, anyị na-akwado ka ị gụọ isiokwu anyị pụrụ iche.
Gụkwuo: Ntuziaka maka ịmepụta ihe ndabere Windows 10
Ka anyị lebakwuo anya n'otú ị ga-esi weghachite sistemụ ahụ ka ọ hụ ọdịdị mbụ ya.
Usoro 1: "Ngalaba"
Enwere ike iji usoro a ma ọ bụrụ akpụkpọ ụkwụ OS gị ma nwee ohere ịnweta ntọala Windows. Ọ bụrụ na ọnọdụ abụọ ahụ zutere, soro usoro ndị a:
N'elu aka ekpe nke desktọọpụ, pịa bọtịnụ ahụ "Malite".
Na windo nke meghere, pịa bọtịnụ ahụ. "Nhọrọ". A na-ese ya dị ka ihe nkedo.
Ihuenyo na nkewa nke ntọala Windows ga-apụta na ihuenyo. Ị ga-ahọrọ ihe "Imelite na Nche".
N'akụkụ aka ekpe nke window ọhụrụ ahụ, chọta akara "Iweghachite". Pịa ozugbo na okwu ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-pịa bọtịnụ ahụ "Malite"nke ga-apụta na nri.
Mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe nhọrọ abụọ: chekwaa faịlụ onwe gị ma ọ bụ hichapụ ha kpamkpam. Na mpio nke meghere, pịa na akara nke kwekọrọ na mkpebi gị. Maka ihe atụ, anyị ga-ahọrọ nhọrọ na ichekwa ozi nkeonwe.
Malite nkwadebe maka mgbake. Mgbe oge ụfọdụ (dabere na ọnụ ọgụgụ nke mmemme arụnyere) ndepụta nke ngwanrọ ga-apụta na ihuenyo, nke a ga-ehichapụ n'oge mgbake. Ị nwere ike ịhụ ndepụta ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Iji nọgide na-arụ ọrụ, pịa bọtịnụ ahụ. "Na-esote" n'otu window.
Tupu ịmalite mgbake, ị ga-ahụ ozi ikpeazụ na ihuenyo. Ọ ga-edepụta mmetụta nke mgbake usoro. Iji malite usoro, pịa bọtịnụ ahụ "Tọgharia".
Ozugbo ịmalite ịkwadebe maka nnyefe ahụ. Ọ na-ewe oge. Ya mere, na-echere njedebe nke ọrụ ahụ.
Mgbe nkwadebe ahụ gachara, usoro ahụ ga-amalitegharịa ozugbo. Ozi na-egosi na ihuenyo na-ekwu na OS na-alaghachi na steeti mbụ ya. Ọganihu nke usoro a ga-egosi ebe a dị ka pasent.
Nzọụkwụ ọzọ bụ iji wụnye components na ndị ọkwọ ụgbọala usoro. N'oge a, ị ga-ahụ foto na-esonụ:
Na-echere ọzọ maka OS iji mezue ọrụ ya. Dị ka a ga-ekwu na ọkwa ahụ, usoro ahụ nwere ike ịmalitegharịa ugboro ugboro. Ya mere echela. N'ikpeazụ, ị ga-ahụ ihuenyo nbanye n'okpuru aha otu onye ọrụ ahụ nke rụghachiri.
Mgbe ị na-emesị banye, faịlụ gị onwe gị ga-anọgide na desktọọpụ gị ma tinye akwụkwọ HTML ọzọ. Ọ na-emepe site na iji ihe nchọgharị ọ bụla. Ọ ga-agụnye ndepụta nke ngwa niile na ụlọ ọrụ ọbịakọta nke edozibeghị n'oge mgbake.
Edoziwo os ugbu a ma dị njikere iji ọzọ. Biko mara na ọ ga-adị mkpa ka ị rụgharịa ndị ọkwọ ụgbọala niile metụtara. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na oge a, mgbe ahụ, ọ ka mma iji software pụrụ iche ga-eme ọrụ niile maka gị.
Usoro 2: Ntọala NchNhr
Usoro a kọwara n'okpuru ebe a na-ejikarị eme ihe n'ọnọdụ ebe usoro ahụ adịghị ebucha n'ụzọ ziri ezi. Mgbe ọtụtụ mgbalị ndị ahụ na-emeghị nke ọma, otu nhọrọ ga-apụta na ihuenyo, nke anyị ga-akọwa na-esote. Ịnwekwara ike iji aka gị malite usoro a kpọmkwem site na os onwe ya, ma ọ bụrụ na ị, dịka ọmụmaatụ, enwekwaghị ohere ịnweta njedebe nkịtị ma ọ bụ njikwa ndị ọzọ. Nke a bụ otu esi eme ya:
Pịa na "Malite" na nkuku aka ekpe nke desktọọpụ.
Ọzọ, ịkwesịrị ịpị bọtịnụ ahụ "Nkwụsị"nke dị na igbe dị n'okpuru n'elu "Malite".
Ugbu a, jide igodo ahụ na keyboard "Mgbanwe". Jide ya, pịa aka ekpe na ihe ahụ Rụgharịa. Sekọnd ole na ole mgbe e mesịrị "Mgbanwe" ị nwere ike ịhapụ.
Utu akụrụngwa gosipụtara na ndepụta nke omume. Nchịkọta nhọrọ a ga-apụta mgbe ọtụtụ mgbalị ndị ị na-emeghị nke usoro ịkwalite n'ime usoro nkịtị. N'ebe a, ọ dị mkpa ka ịpị bọtịnụ akaekpe aka ekpe ozugbo. "Nchọpụta nsogbu".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-ahụ bọtịnụ abụọ na ihuenyo ahụ. Ikwesiri igodo nke mbu - "Weghachite kọmputa na ala mbụ ya".
Dịka ọ dị na ụzọ gara aga, ị nwere ike weghachite Os na ịchekwa data nkeonwe ma ọ bụ nhichapu ha kpamkpam. Iji nọgide n'ihu, pịa bọtịnụ ị chọrọ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, kọmputa ahụ ga-amalitegharịa. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ndepụta ndị ọrụ na-egosi na ihuenyo. Họrọ akaụntụ na nnọchite nke usoro sistemụ ahụ ga-eweghachi.
Ọ bụrụ na edepụtara paswọọdụ maka akaụntụ, ị ga-achọ itinye ya na nzọụkwụ ọzọ. Mee nke a, wee pịa bọtịnụ ahụ. "Nọgidenụ n'ihu". Ọ bụrụ na igodo nchekwa ị wụnyeghị, pịazie "Nọgidenụ n'ihu".
Mgbe nkeji ole na ole, usoro ahụ ga-akwadebe ihe niile maka mgbake. Ị ghaghị pịa "Laghachi na ọnọdụ mbụ" na windo na-esote.
Ihe ndị ọzọ ga - emepe n'otu ụzọ ahụ dịka na usoro mbụ: ị ga-ahụ na ngebichi ọtụtụ ntinye nke nkwadebe maka mweghachi na usoro nrụpụta n'onwe ya. Mgbe ịmechara ọrụ na desktọọpụ ga-abụ akwụkwọ na ndepụta nke ngwa ngwa.
Iweghachite ojiji nke Windows 10
Microsoft na - ewepụta oge ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Windows 10. Ma mmelite dị otú ahụ anaghị enwe mmetụta dị mma na ọrụ nke os niile. Enwere ikpe mgbe ụdị mmepụta ihe dị iche iche na-akpata njehie dị njọ nke na ngwaọrụ anaghị ada (dịka ọmụmaatụ, ákwà ncha anwụrụ ọkụ na bọl, wdg). Usoro a ga - eme ka ị laghachi azụ na nke Windows 10 ma laghachi na usoro.
Ozugbo, anyị na-ahụ na anyị na-atụle ọnọdụ abụọ: mgbe OS na-agba ọsọ ma ọ bụrụ na ọ na-ajụ ịgba ọtọ.
Usoro 1: Na-amaliteghị Windows
Ọ bụrụ na ị nweghị ike ịmalite os, wee jiri usoro a, ị ga-achọ disk disk ma ọ bụ USB flash na Windows 10. N'ime otu n'ime isiokwu anyị gara aga, anyị kwurula banyere usoro nke ịmepụta ndị dị otú ahụ.
Gụkwuo: Ịmepụta windo ụgbọala ma ọ bụ diski na Windows 10
Inwe otu n'ime ihe ndị a n'aka gị, ịkwesịrị ime ihe ndị a:
Mbụ anyị jikọọ ụgbọala na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ.
Mgbe ahụ anyị na-agbanye PC ma ọ bụ reboot (ọ bụrụ na agbanyere ya).
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịkpọ oku "Ntọala menu". Iji mee nke a, n'oge reboot, pịa otu n'ime igodo pụrụ iche na keyboard. Kedu ụdị igodo ị na-adabere nanị na onye nrụpụta na usoro nke motherboard ma ọ bụ laptọọpụ. Ọtụtụ mgbe "Ntọala menu" akpọ site na ịpị "Esc", "F1", "F2", "F8", "F10", "F11", "F12" ma ọ bụ "Del". Na kọmpụta, mgbe ụfọdụ igodo ndị dị mkpa ka enwere ya na "Fn". N'ikpeazụ, ị ga-enwerịrị ihe osise na-esonụ:
Na "Ntọala menu" jiri akụ ndị dị na keyboard iji họrọ ngwaọrụ nke edere os. Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-agbanye "Tinye".
Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, windo nwụnye Windows dị na ihuenyo. Push bọtịnụ n'ime ya "Na-esote".
Mgbe windo ọzọ ga-egosi, ịkwesịrị ịpị ihe ntinye "Nweghachi usoro" na ala.
Ọzọ na ndepụta nke omume, pịa ihe "Nchọpụta nsogbu".
Wee họrọ ihe "Laghachi azụ na mbụ".
N'ọzọ na-esote, a ga-akpali gị ịhọrọ usoro sistemụ nke a ga-arụgharị akwụkwọ ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere otu OS arụnyere, mgbe ahụ, bọtịnụ ahụ, ga-abụ otu. Pịa ya.
Mgbe nke ahụ gasị, ị ga-ahụ ọkwa na data gị agaghị ehichapụ dịka nsonaazụ nke mgbake. Mana mgbanwe niile na usoro ihe omume n'usoro a ga-ewepu. Ịga n'ihu ọrụ, pịa "Nyefee na mbu na-ewu".
Ugbu a, ọ na-anọgide na ichere ruo oge niile nke nkwadebe na mmegbu nke ọrụ ahụ agwụla. N'ihi ya, usoro ahụ ga-alaghachi azụ na nwube mbụ, mgbe nke a gasịrị i nwere ike iṅomi data nkeonwe gị ma ọ bụ ka ị nọgide na-eji kọmputa.
Usoro 2: Site na sistemụ arụmọrụ Windows
Ọ bụrụ na akpụkpọ ụkwụ sistemụ arụmọrụ gị, mgbe ahụ na-arụ ọrụ site na Windows 10 abụghị ihe ọ bụla ị chọrọ iji tụgharịa mgbakọ ahụ.
Anyị na-ekwughachi isi ihe anọ, nke a kọwara na usoro nke abụọ nke isiokwu a.
Mgbe windo na-egosi na ihuenyo "Nyocha"bọtịnụ push "Nhọrọ Di elu".
Ọzọ na ndepụta anyị na-ahụ bọtịnụ "Laghachi azụ na mbụ" ma pịa ya.
Usoro ahụ ga-amaliteghachi ebe ahụ. Mgbe sekọnd ole na ole, ị ga-ahụ window na ihuenyo nke ịchọrọ ịhọrọ profaịlụ ọrụ maka mgbake. Pịa na akaụntụ achọrọ.
Na nzọụkwụ na-esonụ, tinye paswọọdụ site na profaịlụ ahọrọ na ịpị bọtịnụ ahụ "Nọgidenụ n'ihu". Ọ bụrụ na ịnweghị paswọọdụ, ịkwesighi ị jupụta n'ọhịa. Naanị iji nọgide.
Na njedebe ị ga-ahụ ozi na ozi zuru ezu. Iji malite usoro iweghachi, ị kwesịrị ịpị bọtịnụ akara na oyiyi dị n'okpuru ebe a.
Ọ na-anọgide na ichere maka njedebe nke ọrụ a rụrụ. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, usoro ahụ ga-eme mgbake ma dịrị njikere maka ojiji ọzọ.
Nke a na - emechi isiokwu anyị. N'iji ntuziaka ndị dị n'elu, ị nwere ike iweghachị usoro ahụ ozugbo. Ọ bụrụ na nke a anaghị enye gị nchọta ahụ achọrọ, mgbe ahụ ị kwesịrị iche echiche banyere ịtinye sistemụ arụmọrụ.